Safal Khabar - के दयाहाङको उकास्ला त करिअर ?
के दयाहाङको उकास्ला त करिअर ?
बिहिबार, ०२ जेठ २०७६, २० : १३
काठमाडौँ । करीब ७ वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘लुट’ पछि अभिनेता दयाहाङ राईले नेपाली फिल्ममा केही वर्ष राम्रै वर्चश्व जमाए । त्यसअघि उनले सानातिना रोल गरेरै आफ्नो फिल्म करिअर जेनतेन अगाडि बढाइरहेका थिए । ‘लुट’ उनको जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट साबित भएको थियो । यसपछि उनले आजसम्म करिअर पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ । तर, उनले बिस्तारै आफ्नो साख भने गुमाउँदै गएका छन् ।
कति फिल्म उनले सम्बन्ध बनाउन र बचाउनका लागि गरे भने धेरैजसो पैसाको मुख हेरेर गरेको बताइन्छ । 'नेप्टे', 'भैरे', 'कान्छी', 'लाल्टिन' लगायतका करीब एक दर्जन फिल्म उनले स्क्रिप्ट वा आफ्नो भूमिकाभन्दा पनि पैसाको लोभले गरेको चर्चा छ । यी फिल्मले उनको करिअरमा नयाँ इट्टा थप्न कुनै मद्दत गरेनन् । बरु बलियो करिअरको पर्खाल नै कमजोर बन्यो । पैसामुखी हुँदा उनको लोभलाग्दो करिअर यतिबेला बालुवाको घरझैँ भएको छ ।
गत वर्ष फिल्म 'भैरे' रिलिजताका उनले अब फिल्मको संख्यामा कमी गर्ने र सम्झनलायक फिल्म बढी गर्ने बोलेका थिए । तर, उनी आफ्नै बोलीमा टिक्न सकेनन् । 'भैरे' पछि न उनले कुनै सम्झनलायक फिल्म गरेको कसैले महशुस गर्न पाएका छन् न त फिल्मको संख्यामा नै कमी आएको छ । अहिले उनको पाइपलाइनमा गर्न बाँकी र रिलिज हुन बाँकी फिल्मको संख्या आधा दर्जन बढी छ ।
बलिउड अभिनेत्री जिया खानको निधन भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । उनले सन् २०१३ मा...
मेरो कलेजो ७५ प्रतिशत खराब भइसकेको छ : अमिताभ बच्चन
भारतमा शताब्दीका महानायक भनिने अमिताभ बच्चन आजकाल...